China Eco-friendly ịchọ mma Bag Ọhazi mkpọchi obere akpa na Tassel Puller factory na suppliers | Changlin
The dum akpa bụ eke na izute "gburugburu ebe obibi enyi na enyi" chọrọ. Akpa a bụ T-udi nke bụ otu ebe.
Tassel dị nro ma mụbaa ntakịrị ọrụ na pụrụ iche.
Maka ịgagharị, o zuru oke buru ibu iji tinye ihe ịchọ mma ma ọ bụ mposi.
Nke gara aga: Akwụkwọ Straw obere akpa Eco-enyi na enyi Natural Agba Mee Up ịchọ mma Ọhazi
Osote: Natural Akwụkwọ ahịhịa akpa Eco-enyi na enyi ịchọ mma Ọhazi mkpọchi mkpọchi obere akpa Mee Bag